September 21, 2020 Dai 8, 2022 0
Oculus 'yakanakisa yakamira yakamira yeVR headset yakangoita zvirinani - uye zvakachipa
Pros £ 100 yakachipaGorgeous screenBest Oculus controllers parizvinoCons Headband ichiri yakavhenganiswa bhegiIPD "inotsvedza" haisi inotsvedza
Iyo Oculus Kutsvaga 2 inozadzisa chimwe chinhu chinoshamisa: inovaka pane isingatarisirwi budiriro yeakautangira mune ingangoita nzira dzese. Kufanana neKutsvaga, inopwanya chokwadi chaicho mupakeji inotakurika, padivi-ichitsika kudiwa kwePC yekutamba kana inoenderana smartphone uye kukusunungura kubva netambo mukuita. Kusiyana neKutsvaga, zvakadaro, iyo Quest 2 inotanga neinoshamisa £ 299. Neimwe nzira, Oculus akavandudza chigadzirwa chizere nepo achidzikisa mutengo ne £ 100.
Dai iyo Quest 2 yakanga yatanga nemutengo mumwe chete neiyo yekutanga Quest, isu tingadai tichiri kuifarira. Kutenda kudonha kwemutengo unoshamisa, zvakadaro, iyo Quest 2 ikozvino ndiyo yatiri kufarira yeVR headset yenguva dzese.
Oculus Kutsvaga 2 - 64 GB
£ 299.99 Tenga izvozvi
Oculus Kutsvaga 2 ongororo: Izvo zvaunoda kuti uzive
Kufanana neOculus Kutsvaga, iyo Oculus Kutsvaga 2 inomira yakamira yeVR headset isingade chero chinhu kunze kwekuchaja tambo, mamwe mabhatiri eAA uye nzvimbo yakakwana yekukwesha kati chaiyo. Mubhokisi, iwe unowana mahedhifoni, madhiraivha maviri, tambo yekuchaja uye spacer yeavo vanopfeka magirazi. Ndizvo.
Panzvimbo pekuvimba nePC yemitambo, iyo Quest 2 inoshandisa processor ye smartphone kumhanyisa iyo mitambo yaunotamba. Mune ino kesi, ndiyo Qualcomm Snapdragon XR2, musiyano weiyo Snapdragon 865 inowanikwa mune yazvino premium mafoni eApple. Pair iyi yepamusoro-ye-iyo-mutsara processor ne6GB ye RAM uye iwe uchaona kuti iyo Quest 2 iri kukurumidza zvakanyanya kupfuura yakatangira.
Iyo zvakare ine 64GB yekuchengetera kwemukati seyakajairwa asi iwe unogona kukwidza iyo kune 256GB ye £ 100 zvimwe. Kunyangwe ini ndisingafunge kuti iyo yekuchengetera yakafanira, vatambi vemitambo vanozofara.
Ndisati ndaenderera, zvakakodzera kutaura nezve Facebook, Oculus 'kambani yemubereki. Pakazosvika Gumiguru 2020, vashandisi veOculus vatsva vanofanirwa kupinda muchombo chavo vachishandisa Facebook account, pane iyo Oculus imwe. Varipo maOculus account vanobata vanogona kusarudza kuchinjira kuFacebook (kana kwete) kusvika Ndira 2023, panguva iyoyo zvozoitika zvega.
Vamwe vakaratidza kunetsekana nezvekushandisa kweFacebook kwedata, nepo avo vasina maakaundi epaFacebook vanogona kunge vachizeza kugadzira imwe kuti vanakirwe neVR. Pakupera kwezuva, zvakadaro, vanhu vazhinji vanoshandisa Facebook nguva dzose uye vanozokoshesa kuve nyore kweakaundi account kune akawanda masevhisi.
Oculus Kutsvaga 2 ongororo: Mutengo nemakwikwi
Zvichida chinhu chakanakisa nezve Quest 2 ndiwo mutengo. Iko base 64GB kumisikidzwa kuchakugadzirisazve £ 299, inova iyo £ 100 yakachipa pane iyo yekutanga Quest uye yakachipa zvakanyanya kupfuura chero imwe yakakomba VR headset inowanikwa izvozvi.
Kwete kuti kune zvakawanda zvekusarudza kubva. Kunyange HTC's Vive Cosmos (kubva pa- $ 700) kana iyo yakasimba Valve Index (£ 919) inozokwevera kune chero munhu asiri VR vanofarira, kunyangwe iwo maratidziro ari nani. Sony's PSVR (kubva pa- $ 229), Kunyange iri yakachipa, yakaderera-spec uye yeiyo PlayStation chete. NaOculus kuuraya iyo Kutsvaga (kubva pa- $ 399) uye iyo Rift S (£ 399) mukati megore rinotevera, iyo Quest 2 chaizvo ichave iri mumutambo wayo.
Oculus Kutsvaga 2 kuongorora: Dhizaini uye maficha
Ngatiregei kucheka mazwi: Iyo Quest 2 chinhu chinotaridzika. Ini handikwanise kuzvienzanisa zvakananga neKutsvaga asi zvinotaridzika uye zvinonzwa zvidiki uye zviri kureruka - neanopfuura magiramu makumi manomwe, zvirizvo. Oculus yasarudza yakajeka grey / chena pendi basa panguva ino, inogona kana inogona kunge isiri bhegi rako. Ini ndinoifarira.
Kuruboshwe, iwe unowana 3.5mm headphone jack uye USB-C port; kurudyi, bhatani remagetsi uye, pazasi, vhoriyamu rocker. Oculus akaisa mabhanhire epurasitiki ekushandisa ndokuatsiva nemachira, chinova chikomborero nekutukwa; vanoita kuti headset iwedzere kuumbika uye kugadzikana, asi kuomesa bhanhire remusoro panhunzi kuburikidza nematsvaira matsva kunonetsa.
Neraki, Oculus ine mhinduro. Iyo femu iri kuvhura halo-dhizaini "elite" bhanhire - iyo mhando inowanika paOculus Rift S - seyekutanga pane dzinoverengeka sarudzo Optional 2 zvishongedzo. Aya mahedheni emusoro anogovera huremu zvirinani uye zviri nyore kugadzirisa. Iyi chaiyo ichatema pamaoko anobuda chero divi reChipiri 2, uye inowanikwa pakuvhurwa kwe £ 49.
Zvisinei, iyo Quest 2 yakasununguka seyeVR headset inogona kuita uye ndakaona kuti kuichengeta munzvimbo yakasununguka raive basa rakareruka - huremu hwakadzikira hunobatsira pano. Iro kumeso furo rakapfava zvishoma, uye rakadzika zvishoma zvakare, kunyange richaramba richinyora pachiso chako nekufamba kwenguva.
Iyo Quest 2 ichine ina emukati-ekunze ekuteedzera makamera akamisikidzwa sezvaaive paQuest, uye kuchine sarudzo yekugadzirisa yako yekudyidzana nzvimbo (IPD) nemaoko. Sezvineiwo, iwe uchafanirwa kusundira iwo malenzi pachawo kana pamwechete kuti uite izvi, zvinoreva kubvisa headset. Ini ndingasarudza yakajairwa IPD inotsvedza asi zvirinani sarudzo iriko - iyo Rift S isinganzwisisike yakadzora IPD kugadzirisa kune chaiwo marongero.
Ini ndinofanira zvakare kutaura nezvevatongi, nekuti ivo vakavandudzawo zvakanyanya. Ivo zvino vanogara kwenguva yakareba zvakapetwa kana kupfuura yekare pane imwe bhatiri yeAA uye vane yakakura nzvimbo yenzvimbo yekuzorora zvigumwe zvako. Ini ndinosarudza kutaridzika kwevatungamiriri vepakutanga asi zvakanyanya kuomarara kutsoropodza izvi mukuona kwekuvandudzwa kwakadaro.
Oculus Kutsvaga 2 kuongorora: Ratidza
Sungira iyo Kutsvaga 2 kumeso kwako uye unenge uchitarisa mune imwechete yekukurumidza-switch LCD pani ine yakasanganiswa resolution ye3,664 x 1,920 - kana 1,832 x 1,920 paziso. Kuti uenzanise, iyo Quest yakashandisa mapaneru maviri eOLED pakagadziriswa 1,440 x 1,600 neziso (2,880 x 1,600 yakazara) - iri nani zvishoma kupfuura iyo Rift S uye zvishoma zvishoma kupfuura iyo Vive Cosmos.
Ichi chiratidzo hachisi chega chine kugadziriswa kwakanyanya kwechero chigadzirwa cheOculus, asi chinozorodza pa90Hz, izvo zvinoita musiyano unoonekwa nemabatirwo emvura kana kushandiswa kweapp kunoonekwa pachiratidziri. Ini ndinotaura izvi pese pandinoedza imwe nyowani yeVR headset asi zvinogara zviri zvechokwadi: ichi ndicho chakanakisa cheVR kuratidza chandakamboshandisa. Makara akasimba, iyo dema nhanho yakanakisa uye mapikisheni ega ega akaomarara kuita.
Oculus Kutsvaga 2 kuongorora: Performance
Iyo Quest 2 ine yakareruka mushandisi interface, nekukasira kusvika kuchitoro cheOculus, raibhurari yako yemitambo, magariro uye magadziriso asi hapana chimwe cheanoshamisira "Oculus Kumba" mabasa eQuest kana Rift S. Kwete kuti ndiri kunyunyuta: Ini '' M kwete kushandisa mahedhifoni kugaya mumba chaimo.
Ndiri kuishandisa kutamba mitambo, uye iyo Quest 2 inonunura mune izvo. Nemazana emazita aunosarudza kubva - anosanganisira zvidyiwa zvakaita saBeat Saber, Superhot uye Vader Immortal, pamwe nezvimwe zvinonakidza zvitsva, seJurassic World: Mushure - hausi kuzoenda uchida.
Zvino, zveshuwa, pane diki chokwadi chekuti iyo Quest 2 inotsigira Oculus Link, zvichireva kuti iwe unogona kuiisa muPC yako yemitambo kuburikidza netambo imwe uye utambe mitambo kubva kune yako Steam raibhurari. Hazvishamise kuti Oculus iri kutora Rift S: iyo Kutsvaga yakanakisa PC VR mahedhiyo mune yayo chaiko.
Zvakaoma kuyera mashandiro anoita Quest 2 asi ini ndakangoona chiitiko chimwe chete chekusavimbika mushure mekunge ndaenda nekubva kuchitoro cheOculus nekukurumidza. Zvikasadaro, kufambisa mamamenyu kwanga kusina musono, uye mitambo yaitamba zvine mutsindo. Izvi hazvitomboshamisi, kupihwa iyo Hardware inomhanya iyo show, asi zvakakodzera kunongedzera.
Chinhu chimwe chete chakamira VR chaiyo hachina kunyatsoziva hupenyu hwebhatiri. Iyo Quest 2 inomhanya kwemaawa maviri kana matatu uye inotora maawa maviri nehafu kubhadharisa kubva pasina, izvo zviri nani zvishoma pane iyo Kutsvaga. Chinhu chakanaka VR kutamba haisi iyo mhando yechinhu iwe chaunoda kuita kwenguva yakareba panguva.
Changu chichemo chaicho neKutsvaga 2 kusvika parizvino, zviripo, ndechekuti ini handina kukwanisa kukanda chimiro kuti chishande kamwe panguva yangu neyemusoro (uye ndinoziva vekutanga-gen Vanoda vashandisi vakasangana nenyaya dzakafanana). Kubhejera muVR chiitiko chekuzviparadzanisa nacho, saka kugona kutarisa kufambira mberi kwemushandisi pachiratidziro kungave kuwanda kukuru. Kutaura chokwadi, chimiro chacho chiri mubeta, asi ndinoshuva kuti Oculus anga asina kuvhura isati yashandiswa.
Oculus Kutsvaga 2 ongororo: Mutongo
Iyo Oculus Kutsvaga 2 inotora zvese zvataida pamusoro peOculus Kutsvaga - ruzivo rusina tambo, raibhurari yemitambo yakasimba, kurerukirwa kwekushandisa - uye rinovandudza pairi zvakanyanya. Izvi ndizvo chaizvo zvinofanirwa kuve nemusoro weVR: isina kureruka, ine simba uye yakapusa zvekuti kutorwa kwakanyanya kunova kushoma tariro uyezve kutarisira. Mutengo wakaderedzwa uchaenda neimwe nzira yekubatsira mune izvozvi, futi.
Iko hakuna yakapusa nzira yekuisa izvi: kana iwe uchida VR headset, tenga iyo Oculus Kutsvaga 2. Hazvina basa kana iwe uri ruzivo PC VR gamer kana ari chaiye mutsva; iyo Quest 2 zviri pachena kuti ndiyo chete headset yakakosha mari yako.
Oculus Rift S Kutora vatungamiriri kwete kutevera zvakanaka here? Edza izvi kugadzirisa